कृपया तपाइँको ल्यान्डिंग पृष्ठहरू सामाजिककृत गर्नुहोस् Martech Zone
कृपया तपाइँको ल्यान्डिंग पृष्ठहरू सामाजिकृत गर्नुहोस्
शनिबार, अक्टोबर 15, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
हामी घटनाहरूका लागि सधैं ध्यान दिन्छौं जुन हाम्रो दर्शकलाई सान्दर्भिक छ। वेब डेमोहरू, डाउनलोडहरू, वेबिनारहरू, पोडकास्टहरू, कन्फरेन्स रेजिष्ट्रेसनहरू ... हामी सार्थक रूपमा देखा पर्दछ कि तिनीहरू मध्ये कुनैमा पनि शब्द प्राप्त गर्न मन पराउँदछौं। के म बारम्बार भेट्टाउँछु, यद्यपि दुई मुख्य मुद्दाहरू हुन् जसले यसलाई साझेदारी गर्न गाह्रो (वा असम्भव) बनाउँछ अवतरण पृष्ठ:
साझेदारी बटनहरू छैनन् - पहिलो समस्या जुन मैले फेला पारेको छु त्यो अवतरण पृष्ठहरूमा कुनै सामाजिक साझेदारी बटनहरू छैनन्। एक अवतरण पृष्ठ सामाजिक साझेदारीको लागि उत्तम स्थान हो! यदि म एक डाउनलोड वा घटनाको लागि दर्ता गर्दै छु भने सम्भावना यस्तो हुन सक्छ कि यो सायद त्यस्तो चीज हो जुन म मेरो नेटवर्कसँग साझेदारी गर्न चाहन्छु।
कुनै सामाजिक ट्यागिंग छैन - जब तपाईं फेसबुक वा Google+ मा लिंक साझा गर्नुहुन्छ, प्रणाली शीर्षक, वर्णन र तपाईंको पृष्ठबाट एक प्रतिनिधि छवि निकाल्दछ। यदि तपाइँ पृष्ठ ठीकसँग ट्याग गरिएको छ भने, साझेदारी गरिएको जानकारी राम्रो देखिन्छ। यदि त्यहाँ छैन भने यसले पृष्ठबाट जानकारी तान्दछ जुन सामान्यतया गलत छ।
म लिन जाँदैछु Eventbrite, एक प्रणाली जुन मैले भूतकालमा अलि बढी प्रयोग गरेको छु। यहाँ छ कि ईन्टरब्राइटले कसरी एक आगामी घटना प्रदर्शन गर्दछ बुबा २.० शिखर सम्मेलन (मार्चमा)। यहाँ कसरी छ पूर्वावलोकन फेसबुक मा दिनेछ:
ईन्टरब्राइटले साझेदारी बटनलाई राम्रोसँग एकीकृत गर्दछ र प्रयोग गर्दछ ग्राफ प्रोटोकल खोल्नुहोस् सबै आवश्यक जानकारी आबाद गर्न। दुर्भाग्यवस, यद्यपि, इवेंटब्रिटले तपाईंलाई तपाईंको कार्यक्रमको लागि मनपर्ने छवि सेट गर्न अनुमति दिँदैन। यसको सट्टामा, उनीहरूले आफ्नो लोगोको साथ चित्र बनाउँछन्। हाँ!
र यहाँ छ Google+ मा स्निप्पेट पूर्वावलोकन:
दुर्भाग्यवस जहाँसुकै वेब डिजाइनरहरूको लागि, गुगलले खुला ग्राफ प्रोटोकलसँग खेल्ने निर्णय गरेन र यसको सट्टा पृष्ठमा उनीहरूको आफ्नै मेटा जानकारी आवश्यक छ। गुगल + बटन पृष्ठ (स्निपेट अनुकूलितमा पृष्ठको तल हेर्नुहोस्)। नतिजाको रूपमा, इवेंटब्रिट स्निपेट भय terrible्कर देखिन्छ ... पृष्ठबाट पहिलो छवि तान्दै र केही अनियमित पाठ।
मानिन्छ, LinkedIn खुला ग्राफ प्रोटोकलको पनि उपयोग गरीरहेको छ, तर मैले अहिलेसम्म वास्तवमा यो काम गरेको देख्न पाएको छैन। म यसलाई कहिलेकाँही राम्रो तस्विरमा तान्दैछु, र साइटबाट अन्य छविहरू जुन सदाको लागि क्यास गरिएको छ। लिंक्डइनले तपाईंलाई शीर्षक र वर्णन सम्पादन गर्न अनुमति दिँदछ। केहि कारणका लागि यो पृष्ठको शीर्षक शीर्षकमा पुलिएको देखिन्छ पृष्ठ खुला शीर्षक ट्यागमा सेट शीर्षक।
एउटा नोट यदि तपाइँ लैंडि pages पृष्ठहरू डिजाइन गर्न WordPress प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। म Joost de Valk, जो एक अविश्वसनीय विकसित गर्न पुगे WordPress SEO प्लगइन यसले खुला ग्राफ प्रोटोकल समावेश गर्दछ र उसलाई Google+ मेटा ट्यागहरू थप्न आवश्यक जानकारी पनि पठाउँदछ। ती चाँडै कार्यान्वयन गरिनु पर्छ!
क्यारियर दिमागका लागि सामाजिक मिडिया